Tag: kuvimbika » Martech Zone
Ma Strategies Ari Kuuraya Yako Yemukati Kushambadzira #CONEX
Chipiri, August 21, 2018 Chitatu, Nyamavhuvhu 22, 2018 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Nezuro ndakagovana nezve zvakawanda zvandakadzidza nezve kuvaka maABM mazano kuCONEX, musangano muToronto neUberflip. Nhasi, vaburitsa zvimisikidzwa zvese nekuunza kwese kushambadza superstar iyo indasitiri yaifanira kupa - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, naScott Stratten kungodoma vashoma. Nekudaro, iyo vibe yakanga isiri yako yakajairika zvemukati how-to's uye matipi. Anongova maonero angu, asi hurukuro nhasi yanga yakawanda
Zvemukati ndezvenguva pfupi, Kuvimba uye Kuvimbika zvinogara
Chitatu, December 3, 2014 China, December 4, 2014 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Mavhiki mashoma apfuura ndanga ndiri kunze kweguta uye handina kuwana yekupa yakanyanya nguva yekunyora zvemukati sezvandaigara ndichiita. Panzvimbo pekukanda imwe hafu-mbichana mbichana kunze, ini ndaiziva kuti yaive mwaka wezororo wevakawanda vevaverengi vangu futi uye ini ndakangosarudza kusa nyora zuva nezuva. Mushure memakore gumi ekunyora, ndiyo mhando yechinhu chinondipengesa - kunyora chinongova chikamu che
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Kushambadzira munguva yemazuva ano chinhu chinonakidza; nepo webhu mushambadziro wekushambadzira uri nyore kwazvo kuteedzera kupfuura echinyakare mishandirapamwe, kune ruzivo rwakawanda rwuripo zvekuti vanhu vanogona kuoma mitezo mukutsvaga kwemamwe data uye 100% ruzivo rwakarurama. Kune vamwe, iyo nguva yenguva yakachengetedzwa nekukwanisa kukurumidza kuwana huwandu hwevanhu vakaona kushambadzira kwavo pamhepo mukati memwedzi wakapihwa wakarambwa nenguva